I-Paradise8 Casino ukubuyekeza kweselula - Kwase Ningizimu Afrika
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-paradise 8 casino
Isibuyekezo se-Paradise 8 Casino
Ibhonasi Lokukwamukela:300% ne 888 Ibhonasi Lokukwamukela lama-Free Spins
58 ama-spins Ayikho Idiphozithi
Ufuna i-casino ephephile eku-inthanethi ukuze ujabule ngo-2021? Ufike endaweni efanele. Ngabe i-Paradise 8 lingakusiza ugweme i-virus blues? Lona ngumbuzo ocindezela kakhulu esizozama ukuwuphendula kulokhu kubuyekeza.
Njengenjwayelo, sizobheka kakhulu izici ezibalulekile kubadlali baseNingizimu Afrika. Futhi sizozama ukukwenza ngamagama ambalwa ngangokunokwenzeka, ngaphandle kokushiya izingcezu ezibalulekile ngaphandle!
Ngakho-ke ngaphandle kokuchitha isikhathi, ake siqale ngokubuyekeza ngokuphelele futhi kuze kube yimanje kweParadise 8 Casino ngo-2021!
Ukuvela kokuqala kuphakeme kuqala – ikhasino inewebhusayithi yesimanjemanje enomuzwa omnyama futhi opholile, konke kushubile ngemibala emnyama yetiye nampunga. Uma ungathandi amakhasino aku-inthanethi aqhakazile futhi abukhali, uzothanda le webhusayithi ngokuqinisekile.
Kukhona inketho yokudawuniloda etholakalayo, ekhombisa ukuthi lena ikhasino yakudala. Kepha lokho akuyona into embi nakancane ngoba iqembu elingemuva kwekhasino likwazile ukulivuselela njalo.
Uzothola zonke izici zesimanje ezishayela imboni yokugembula eku-inthanethi ziye ezindaweni eziphakeme ngo-2021 – izinto ezinjengesipiliyoni esisheshayo futhi esibushelelezi esiku-inthanethi, imidlalo esuselwa kwisiphequluli (kokubili ku-PC nakuselula), izici zakamuva zokuphepha, nezindlela zokukhokha eziku-inthanethi konke kuyingxenye yesipiliyoni sePharadesi 8.
Le midlalo miningi, noma ungathola ukuthi izinombolo ziyantuleka uma kuqhathaniswa namanye amakhasino wabathengisi abaningi. Kepha le khasino ithatha kuphela imidlalo kusuka kubahlinzeki abasezingeni eliphakeme, eqinisekisa isipiliyoni sokudlala esihle.
Sizobuye sihlolisise okunye kokunikezwa kokukhushulwa kanye nemivuzo yokwethembeka etholakala eParadise 8. Zibukeka zihloniphekile, futhi ukwengezwa kwebhonasi yediphozithi cishe kwenza le khasino ingabi yingqondo yabadlali abasha ngo-2021.
Abadlali abaningi baseNingizimu Afrika banemibuzo ecindezelayo engqondweni uma befuna ikhasino entsha eku-inthanethi:
● Ingabe iNingizimu Afrika ibalwa phakathi kohlu lwezindawo ezivinjelwe?
● Ngabe bayawamukela amaRandi esigabeni sasebhange sokufaka kanye nokukhipha imali?
● Ngabe ikhona imikhawulo emabhonasi kubadlali baseNingizimu Afrika?
● Futhi ekugcineni, ngabe leli yikhasino elinokwethenjelwa futhi elisemthethweni ngempela?
Ake siqale ukuphendula eminye yale mibuzo:
Okokuqala, iParadise 8 iyikhasino elayisensi elisebenza eCuracao eCaribbean. Amakhasino aku-inthanethi anamandla kuphela amukela abadlali abavela kuwo wonke amazwe. Amakhasino eLegit afana nePharadesi 8 kufanele anqande ukufinyelela kubahlali bezizwe ezithile.
Kepha kulokhu, iNingizimu Afrika ayikho ohlwini lwamazwe avinjiwe. Ukhululekile ukubhalisa i-akhawunti yomdlali kule khasino uma uhlala eNingizimu Afrika. Vele uqiniseke ukuthi ungumuntu omdala osemthethweni, okungenani oneminyaka engu-18 ubudala noma ngaphezulu.
Njengekhasino yomhlaba wonke, iPharadesi 8 lamukela izinhlobo ezahlukahlukene zezimali, kufaka phakathi ama-fiat kanye ne-bitcoin. Futhi yebo, ungakhokha futhi ucele ukuhoxiswa kumaRandi, asikho isidingo sokukuguqula kube amadola noma ama-euro noma yini.
Ikhasino inohlu olude lwamazwe lapho bengeke bakwazi ukuhlinzeka ngamabhonasi athile. Ungaluthola lolu hlu ekhasini lemigomo nemibandela lewebhusayithi. Futhi, iNingizimu Afrika ayibonakali kulolu hlu. Uphephile ukufuna noma iyiphi ibhonasi abayinikezayo ePharadesi 8 Amakhasino.
Okokugcina kodwa hhayi okuncane kakhulu, yindaba yokwethembeka. IPharadesi 8 selokhu yaba khona kusukela ngo-2005. Leso yisikhathi eside impela kakhulu ebhizinisini lokugembula ku inthanethi. Balondoloze idumela elihle kubadlali, ngezikhalazo ezimbalwa kakhulu futhi azikho izingxabano ezinkulu.
Kuhlale kuyindlela ephephile yokudlala kumakhasino amadala, asunguliwe. Futhi uzothola imisebenzi embalwa kakhulu endala kunePharadesi 8 ngo-2020! Kuyikhasino ephephe impela, njengoba sizochaza ngokwengeziwe ezigabeni ezilandelayo.
Amabhonasi e-Pharadesi 8?
Wonke amakhasino aku-inthanethi anikela ngamabhonasi amukelekile – kuwumkhuba ojwayelekile embonini. Kepha zimbalwa zazo ezilingana nalokho ozokuthola zikulindile e-Paradise 8 casino, ikakhulukazi uma uthanda ukudlala ama-slots. Bheka:
I-100% Ibhonasi Yokwamukela + 888 Spins yamahhala kuDiphozithi yokuqala
Ukuze ibhola ligingqike, ikhasino inikeza abadlali abasha ibhonasi efanayo engu-100% kwidiphozi yabo yokuqala. Nayi imininingwane yalokhu kunikezwa:
● Ungafaka isicelo esifinyelela ku-R10,000 njengengxenye yale bhonasi.
● Isidingo sokubheja siphansi ngokungenangqondo ku-20x
● Konke okuwinayo kungokwakho ukuthi ungakukhipha – akukho mingcele ekuphumeni kwemali!
● Sebenzisa ikhodi yephromo NEW100_888SPINS
Akugcini ngaleyo bhonasi efanayo nayo. Lapho usuqedile ukubheja inani lebhonasi, ungafaka isicelo sokwengezelwa –
● Funa ama-spins wamahhala angu-888 ngemuva kokuqeda ibhonasi yakho yokwamukela engu-100%
● Ama-spins asebenza ku-Tahiti Time video slot
● Umkhawulo wokukhipha imali kuma-win win kusuka kuma-spins wamahhala ngu-R3500
● Sebenzisa ikhodi yephromo 888WAVES ku-cashier yekhasino
200 Ibhonasi Yediphzithi ku Diphozithi Yesibili
Le yingxenye yesibili yebhonasi eyamukelekile eParadise 8 Casino. Njengoba ukwazi ukubona esihlokweni uqobo, kuvulwa lapho wenza idiphozi yakho yesibili yekhasino futhi unezici ezilandelayo-
● Uthola ibhonasi efanayo engu-200% efinyelela ku-R2000
● Imfuneko yokubheja ingama-30x kuphela
● Akukho mkhawulo ku-cashout enkulu ngale bhonasi
● Sebenzisa ikhodi engu-200MATCH ukuvula lo mnikelo
300% Ibhonasi Lokwamukela le Bitcoin noku buyiselwa kwemali
Lokhu kunikezwa kwenzelwa kuphela abadlali abasha abathanda ukufaka idiphozi yabo yokuqala ekhasino kuma-cryptocurrensets.
● Thola ibhonasi engu-300% kwidiphozi yakho yokuqala oyenzile usebenzisa ama-bitcoins
● Ikhodi yephromo yalokhu ithi 300BTC
● Uma usuqedile ibhonasi ikhasino inikeza enye imali engu-100% yokubuyiselwa imali
● Ikhodi yephromo yale ngxenye yomnikelo ngu-100BTC_BACK
Amakhodi Ebhonasi Angena diphozithi e-Paradise 8
Njengabo bonke opharetha be-casino abanolwazi ku inthanethi, abantu ngemuva kwe Paradise 8 bayazi ukuthi abadlali banga jabulela kanjani amabhonasi ediphozi. Kungakho ungafaka isicelo sediphozithi ekhethekile engekho ePharadesi 8 ngo-2021:
● Bhalisa i-akhawunti entsha ukuze ufune isicelo
● Uthola ama-Free Spins angama-58 njengengxenye yalesi sivumelwano
● Isikhala esidlalwayo salokhu kunikezwa yi-Ocean Treasure
● I-cashout enkulu ngu-R500 ngalo mnikelo
● Konke ukunikezwa kwe-promo e-Paradise 8 casino kunesidingo sokubheja esingu-20x
Amnye Amaphromoshini Akhethekile Anikezwa yiPharadesi 8 Casino
I-Paradise 8 inencazelo eyingqayizivele yokunikezela ngamabhonasi ajwayelekile kubadlali abathembekile. Amakhasino amaningi ahlinzeka ngokulayishwa okuthe xaxa kanye nokunikezwa kwamahhala kwe-spin kubadlali abanamathela ngemuva kwebhonasi eyokwamukela. E-Paradise 8, yilokhu okuthola ekhasini lepromo ngaphandle kwamabhonasi okwamukelwa –
Ukubuyiselwa kwemali kwansuku zonke okuqinisekisiwe
● Lokhu kunikezwa okumangazayo kuvulekele bonke abadlali ababhalisiwe
● Ikhasino iqinisekisa u-10% wokulahlekelwa kwakho ngosuku olwedlule njengembuyiselo yemali
Khuphula izinga lakho eqenjini le-VIP ukukhuphula lokho kuze kufike ku-30%
● Lahlekelwa ngoku ngaphezulu kwe- $ 100 ngesonto futhi ungathola ukubuyiselwa imali okungu-25% masonto onke
● Ukunikezwa masonto onke kufakwa ku-akhawunti yakho ngoMsombuluko.
Ukunikezwa kokubuyiselwa kwemali kuyakhangisa kakhulu futhi kuyamangaza. Kepha uma lokho bekungikho konke, abadlali bebengaba nezizathu ezisemthethweni zokukhononda. Kepha uma ubheka i-VIP Club e-Paradise 8 casino, uzothola izizathu zokujabula.
Imiklomelo Yokuthembeka Ye-VIP Club
● Bonke abadlali ababhalisiwe baba ngamalungu eParadise 8 VIP Club
● Bajoyina ezingeni lokuzenzakalelayo, eliza nalezi zinzuzo-
Ibhonasi engu-R100 yamaviki onke + ne-90% yediphozithi
○ R100 + 200% Ibhonasi Ngezinsuku Zokuzalwa
Rewards Imiklomelo ye-Comp yamaphoyinti angu-1 ekubhejeni kuka-R10
● Ngaphezu kokuzenzakalelayo, uthola amazinga amathathu e-VIP
● Yonke imivuzo eshiwo ngenhla ithola izinzuzo eziphakeme ezingeni ngalinye
● Abadlali abafaka okungenani u-R1000 ngeviki bangafuna u-25% wokubuyiselwa imali kuze kufike ku-R25,000
● Okunye ukunikezwa kwe-imeyili nokunikezwa kwansuku zonke kuthunyelwa yithimba lekhasino kumalungu e-VIP!
Ungabhalisa kanjani ku-inthanethi e-Paradise 8 Casino
Amakhasino aku-inthanethi athatha ubuhlungu obukhulu ukuqinisekisa ukuthi inqubo yokubhalisa yabadlali abasha iyashesha futhi ayibuhlungu. Ungabona lokhu kusebenza e-Paradise 8 casino futhi. Umhlahlandlela wesinyathelo ngesinyathelo uzokusiza uthole i-akhawunti entsha sha yekhasino kungakapheli imizuzu!
● Udinga lezi zinto ukuqala ukudlala ekhasino yesimanje eku-inthanethi njengePharadesi 8-
○PC I-PC / Mac ene-Windows, OS X noma i-Linux NOMA
○ Idivayisi ephathekayo enezibuyekezo zakamuva ze-Android noma ze-iOS
○Ukuxhumeka kwe-inthanethi okusebenzayo (i-4G noma i-WiFi ekhethwayo)
● Ungasebenzisa iPc / laptop noma i-smartphone / ithebhulethi ukubhalisa eParadise 8
● Vakashela iwebhusayithi yekhasino kusiphequluli sakho osithandayo (kunconyiwe i-Chrome noma iSafari)
● Chofoza noma uthephe inkinobho eluhlaza “Bhalisa” kuwebhusayithi
● Kuzovela ifomu futhi kufanele ugcwalise eminye imininingwane yakho, efana naleyo –
○ Igama lakho eligcwele
○ Iphasiwedi ye-akhawunti yakho yekhasino
○ Ubulili bakho nobudala bakho
○ Ikheli eligcwele lokuxhumana nenombolo yeselula
● Khumbula ukunikeza ulwazi olunembile kuphela – uma kungenjalo uzoba nenkinga lapho ikhasino yenza ukuqinisekiswa komsebenzisi!
● Ngemuva kokugcwalisa amabhokisi, yamukela imigomo yekhasino bese uqedela ukubhalisa ngokucindezela inkinobho yokugcina
● Uzothola i-imeyili yokuqinisekisa kukheli lakho le-imeyili elihlinzekiwe.
● Chofoza isixhumanisi kuleyo imeyili ukuqedela ukubhalisa.
● Manje usungakwazi ukuthola ibhonasi yediphozithi, noma wenze idiphozi yokuhlenga lelo phakethe lokwamukela elihle.
I-Paradise 8 Casino isebenzisa i-Download ne-Instant Online software enikezwe inkampani edume kakhulu ebizwa ngeRival Gaming. Ilabhulali yabo yemidlalo igcwele izikhala eziningi zamavidiyo, imidlalo yetafula nezinye izihloko zokugembula ezivela kuRival Gaming.
Kepha lokhu akusho ukuthi iParadise 8 iyikhasino elihlinzeka lodwa – liphinde linikeze imidlalo evela kwezinye izinkampani ezaziwayo njengeBetsoft, Tom Horn, Spinomenal, neSaucify. Ungathola yonke ikhathalogi ku- “Casino Games” yewebhusayithi yePharadesi 8.
Imidlalo yonke ihlelwe ngobunono ngezigaba ezihlukene. Sekukonke, iPharadesi 8 likhaya leziqu ezihlukile eziphakathi kuka-200 no-300. Nakhu ukubuka okusheshayo izinhlobo ezahlukene zemidlalo ongayijabulela lapha:
Ikhasino likhaya lemidlalo eyi-121 yama-video slot ngo-2020. Lokho kungahle kungazwakali njengokuningi, kepha kunokuqukethwe okwanele lapha ukukugcina umatasa isikhathi eside. Ngaphandle kwalokho, baqhubeka bengeza imidlalo emisha ngaso sonke isikhathi. Ungadlala ama-classic angu-3-reel nama-5-reel video slots eParadise 8 Casino.
Ukungezwa okuthakazelisayo ama-jackpots aqhubekayo – le midlalo yama-slot iza nemiklomelo emikhulu ekhuphuka ngosayizi ngaso sonke isikhathi. Ngezihloko ezinjenge-1 Million Reels BC noMajor Moolah, ungaceba kakhulu ngemizuzwana embalwa yenhlanhla.
Izikhala eziphezulu zamavidiyo e-Paradise 8 casino zifaka izihloko ezinjenge-Arabian Tales, Dark Hearts, Diamond Dragon, Popping Pinatas, Ten Sons, Lion’s Roar, neMystic Wolf.
Ngenkathi kungekho ukuqagela ongakuthola engxenyeni yama-slots evidiyo yePharadesi 8, okuphambene kungashiwo esigabeni semidlalo yetafula. Lapha, uzothola yonke imidlalo ejwayelekile yamakhadi. Izihloko ezinjenge-blackjack yezandla eziningi, i-American Roulette, iBaccarat, iCraps, nePai Gow zilindele abadlali.
Impela, inani lemidlalo liphansi nge-10 kuphela enikezwayo ngesikhathi sokubuyekezwa kwethu. Kepha akukho ukungabaza ikhwalithi yemidlalo lapha. Futhi yonke imidlalo emikhulu imelwe, ukuze ube nokuhlangenwe nakho okuphelele kwesitayela seVegas lapha.
Ngaphandle kwemidlalo yama-slots nemidlalo yetafula, kunezinye izinhlobo ezimbili ezinikezwayo ePharadesi 8 – i-video poker nemidlalo ekhethekile. Esikhathini esidlule, uzothola ukuhlukahluka okuningi kakhulu komdlalo we-poker single player – izihloko ezinjengeDeuces Wild, Joker Poker, Jacks noma Better, ne-Aces neFace ziyatholakala.
Imidlalo ekhethekile iyindlela yokudlala yebhingo, i-keno, i-arcade, i-lotto nemidlalo yokulingisa. Kunemidlalo eyishumi nambili engajwayelekile lapha, enamagama amnandi afana neCavalier Cash, Itchin ’2 Win, iGunslinger’s Gold, iPenguin Payday, iTiki Treasure, ne-90-Ball Bingo.
Uma ukujabulela ukudlala imidlalo kuselula yakho, kunezindaba ezimnandi nazi. IParadise 8 casino iyatholakala kuzingxenyekazi ezinkulu zeselula njenge-Android ne-iOS. Ungadlala ama-slots amahle nemidlalo yekhasino kuma-iPhones, amaselula we-Samsung, neminye imikhiqizo efana neHuawei, Mobicel, ne-LG.
Futhi awudingi ihadiwe ebizayo ukuze usebenze imidlalo yamakhasino yakamuva eParadise 8. Ungadlala imidlalo ngokushelelayo nakumafoni wesabelomali. Vele uqiniseke ukuthi unezivinini ezihloniphekile ze-4G noma ze-WiFi ukuze uthole isipiliyoni sama hhala.
Ngingayilanda iParadise 8 Casino kuselula yami?
Cha, inketho yekhasino yokulanda eParadise 8 ingeyabasebenzisi be-PC Windows kuphela. Azikho izinhlelo zokusebenza ezitholakalela ama-iPhones noma i-Android, ngoba nje zibiza kakhulu futhi azidingeki. Ngobuchwepheshe besimanje be-HTML5, amakhasino aku-inthanethi awasadingi ukuthuthukisa izinhlelo ezihlukile zabasebenzisi beselula.
Ungadlala imidlalo ePharadesi 8 Amakhasino kusiphequluli sakho seselula. Isayithi le-inthanethi elisheshayo lekhasino lilungiselelwe ngokuphelele izikrini zeselula. Lokho kusho ukuthi uma uvula isayithi kuselula, izobukeka njengohlelo lokusebenza lweselula, hhayi njengewebhusayithi. Uzothola isipiliyoni sokudlala esisheshayo futhi esibushelelezi ngenxa yalokhu.
Izindlela Zokuhoxa Zemukelwa eParadise 8 Casino
Isivinini Soku Khipha Imali
Wire Transfer Yebo Ezinsukwini eziyi-7
Visa Yebo Ezinsukwini eziyi-7
Bitcoin Yebo Ezinsukwini eziyi 1-3
Skrill Yebo Ezinsukwini eziyi 1-3
Neteller Yebo Ezinsukwini eziyi 1-3
Izindlela Zoku Diphozitha Ezamuklwe e-Paradise 8 Casino
Imininingwane mayelana ne Casino
Kusungulwe: 2005 Inombolo yamahhala ye-SA: Cha
Opharethwa ngu: SSC Entertainment NV, Curacao Email: [email protected]
Inguqulo Yokudawiloda: Yebo 24/7 356 ukwesekwa: Yebo
Izinzuzo nezingozi ze Paradise 8 Casino
Yini Eyenza iParadise 8 Casino Ukhethe Oludumile Kubadlali BaseNingizimu Afrika?
Sekukonke, iParadise 8 iyikhasino enhle kakhulu eku-inthanethi evela kubadlali emhlabeni wonke. Ungakubona lokhu kusuka kuzinzuzo nobubi ngaphezulu. Kepha inezici ezithile ezikhethekile ezenza kube inketho enhle kubadlali baseNingizimu Afrika
● Ayikho imikhawulo yokubhalisa kubadlali baseNingizimu Afrika
● Wonke amabhonasi ayatholakala
● Ungakhipha futhi ufake imali kumaRandi
● Inezimali zansuku zonke ezibuyisa imali nezithuthukayo
Izikhalo e-Paradise 8 Casino yase Ningizimu Afrika
Njengoba iParadise 8 ineminyaka ecishe ibe yi-15 ikhona, sihlangabezane nezikhalazo ezithile zabadlali esikhathini esedlule. Ukuntuleka kwemidlalo bekukodwa, njengoba bekuyizihloko zeRival Gaming kuphela ezazitholakala esikhathini esedlule. Kepha lokhu kuxazululwe njengoba bengeze abanye abathengisi abanjengoBetsoft.
Izinkokhelo ezihamba kancane ngesinye isikhalazo, esinganqanyulwa kalula uma usebenzisa izindlela zokukhokha njenge-Neteller, Skrill, ne-Bitcoin. Iningi lezikhalazo ngaleli khasino alisasebenzi, njengoba zihlala zilithuthukisa ngaso sonke isikhathi.
Ingabe i-Paradise 8 Casino isemthethweni e-Ningizimu Afrika?
Ngokomthetho waseNingizimu Afrika, awekho amakhasino aku-inthanethi asemthethweni ezweni. Kepha kuphela amakhasino azinze ngaphakathi eNingizimu Afrika abhekiswe ngaphansi kwalo mthetho. Njengoba iParadise 8 Casino iyikhasino engaphesheya kwezilwandle ezinze eCaribbean, ayithinteki. Noma ngabe bekukhona, kunezingozi ezicishe zingabi bikho ekudlaleni kule khasino. Abadlali baseNingizimu Afrika baphephe nge-100% lapho bedlala kumakhasino aku-inthanethi. Ngeke ushushiswe ngokudlala online – lokhu akukaze kwenzeke.
Ngiyikhipha kanjani imali e-Paradise 8 Casino?
Imvamisa, amakhasino aku-inthanethi athumela imali kwi-akhawunti / ikhadi efanayo noma indlela yokukhokha esetshenziswa isidlali ngokufaka imali. Ungakhipha imali yakho ekhasino ungene kwi-akhawunti yakho yasebhange uma unekhadi lesikweletu le-VISA. Uma kungenjalo, ungasebenzisa izikhwama ezikwi-inthanethi ezinjengeSkrill neNeteller. Inketho ephephe kakhulu isikhwama se-bitcoin. Uma ungenankinga nokulinda inkokhelo, ungahlala ukhetha ukudluliselwa kwebhange.
Yini iParadise 8 Casino?
Kuyikhasino eku-inthanethi enikeza amakhasimende imali yangempela yokugembula ngokusebenzisa ama-video slots nemidlalo yamakhadi ebonakalayo. Ukudlala le midlalo, udinga ukungena kwi-inthanethi ngokusebenzisa ikhompyutha noma iselula, ube ngaphezu kweminyaka engu-18, futhi ube nekhadi lesikweletu noma i-akhawunti yasebhange. Abadlali baseNingizimu Afrika bamukelekile kuleli khasino elingasogwini.
Ngubani ophethe iParadise 8 Casino?
Ikhasino liphethwe yingubo ebizwa nge-SSV Entertainment. Bangama-opharetha wekhasino aku-inthanethi anolwazi kakhulu azinze eCuracao eCaribbean. Basebenza cishe amanye amakhasino aku-inthanethi ayi-5, ngaphandle kweParadise 8. Wonke amakhasino aphethe ilayisense yokugembula yeCuracao.
Ingabe iParadise 8 Casino inezici zokubheja ezemidlalo?
Cha, lena ikhasino ekhethekile eku-inthanethi, engenayo i-sportsbook engezwe kuyo. Awukwazi ukubeka ukubheja kwezemidlalo ebukhoma. Ungadlala ama-slots nemidlalo yamakhadi ngama-wager wemali yangempela lapha.
Iphephe kangakanani i-Paradise 8 Casino?
I-Paradise 8 Casino iphephe kakhulu futhi ivikelekile. Isebenzisa ukubethela kwakamuva kwe-128-Bit SSL ukuvikela iwebhusayithi nakho konke okwenziwayo komdlali. Ikhasino lisebenzisa isoftware evela kwiRival Gaming – isoftware efanayo isetshenziswa ngamakhulu amanye amakhasino aku-inthanethi. Yonke imidlalo ekhasino ivela kubathengisi abaziwayo futhi ilungile ngo-100%. Ngezindlela zokukhokha eziphephile njenge-VISA, i-Skrill, ne-Bitcoin, uhlelo lwebhange nalo luphephile nge-100%.